उपचारका लागि दुई लाख सिरानीमा राखेर सुत्नुपर्ने बाध्यता ! – List Khabar
Home / Uncategorized / उपचारका लागि दुई लाख सिरानीमा राखेर सुत्नुपर्ने बाध्यता !
उपचारका लागि दुई लाख सिरानीमा राखेर सुत्नुपर्ने बाध्यता !
admin August 2, 2021 Uncategorized Leaveacomment 35 Views
आकस्मिक अवस्थामा बिरामीलाई थप उपचारका लागि अन्यत्र पठाउन हेलिकप्टर नै चार्टर गर्नुपर्ने भएपछि खोटाङवासीलाई रु कम्तिमा दुई लाख सिरानीमै राखेर सुत्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । स्वास्थ्यमा जटिल किसिमका समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँलगायत अन्य सुबिधासम्पन्न अस्पताल लगेर उपचार गराउन परेकाले जिल्लावासीमा यस्तो बाध्यता आइलागेको हो ।
“सङ्क्रमितले हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपयो भने कम्तीमा पनि रू तीन लाख ५० हजारसम्म शुल्क तिरिरहनु परेको छ”, उनले भने, “सबैको हेलिकप्टर चार्टर गर्न सक्ने अवस्था छैन । जिल्लाबाट सिफारिस भएर पठाइइएका मध्ये र तत्काल उद्दार गर्नुपर्ने कोभिड सङ्क्रमित र अन्य आकस्मिक घटनाका बिरामीका लागि निःशुल्क हेलिकप्टर व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको हो ।”
सङ्क्रमितको अहिले काठमाडौँस्थित अल्का अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार भइरहेको उनका आफन्तले जनाएका छन् । उनीहरुकानुसार सङ्क्रमित राई आफै मोटरसाइकल चलाएर याम्खा आएपछि परीक्षण गर्दा उनमा सङ्क्रमण पुष्टि भएर उपचार थालिएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । उपचारकै क्रममा श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि आफन्तले हेलिकप्टर चार्टर गरेर राजधानी पठाएका गाउँ कार्यपालिका सदस्य अमृत गिरीले बताए ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्थामा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिए तत्काल अस्पताल पुयाउन लाखौँ रकम खर्चिएर हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स वा अनय सवारी साधनबाट छिटो पुग्न सम्भब नभएकाले सङ्क्रमित महँगो शुल्क तिरेर हेलिकप्टर चार्टर गर्न बाध्य भएका हुन् ।
केही दिनयता वर्षाका कारण ठाउँ–ठाउँमा पहिरो खसेकाले सडकबाट बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन सकस भएको छ । कतिपय तत्काल अस्पताल पुयाउनुपर्ने अवस्थाका बिरामी बोक्न हेलिकप्टर चार्टर गर्नुको विकल्प नभएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
Previous आज पनि घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
Next डिर्भोस पछि पनि अभिनेता आमिर र किरण यस्तो अबस्थामा फेला परे